အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ဆန်တိုဖူး
15 Responses to “ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ဆန်တိုဖူး”
ဆန်တိုဖူးတော့ ဘယ်လိုမှ မကြိုက်ဘူး မချောရေ.. လုပ်နည်းအတွက်တော့ ကျေးဇူးပါ..း).. အိမ်မှာ အိမ်ကလူတွေစားရင် ကျွန်တော်က ငတ်နေကျ... အေးအေးကြီးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ကြီးကို မကြိုက်တာ.. :D.. တိုဖူးကျတော့ အသေကြိုက်..း)..
မချော... အဲဒီဆန်တိုဖူးက.. ပြင်ဦးလွင်နဲ့ မိုးကုတ်မှာလည်းစားကြတယ်.ခင်ဗျ.။ ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်.။ အမေ့ကိုတောင်သတိရလာပြီ.း)
လုပ်စားကြည့်တယ် မဖြစ်ဘူး ဆန်ကလဲ ဆန်မာဆိုတာမသိဘူးလေ
ခုတစ်ခါလောက်ပြန်လုပ်စားဦးမယ် တိုဟူးဝါထက်ပိုပြီး ဆန်တိုဟူးကိုကြိုက်တယ် ချဉ်စော်ခါးသီးဝယ်ထားပြီ
အောင်မလေး အကြိုက်ဆုံးအစားစာထဲမှာ သူပါတယ်...။ မချောတို့က ဆီတိုဖူးနဲ့စားတာ မီးမီးတို့ ရှမ်းပြည်မှာကျတော့ ပဲပုပ်အနှစ်ရည်နဲ့ထည့်စားတာ...ပြောရင် သရေတောင်ကျချင်လာပီ ရှလွှတ်...။
စားချင်စရာလေး။ ရွှေချောရေ တစ်ခါမှတော့ မစားဘူးဖူး။ တိုဟူးအ၀ါတော့ ကြိုက်တယ်....း)
ဆန်မာရှာဖို့ ခက်တယ် ချောရဲ့...
အခုတော့ ချောချက်ထားတာလေးကိုပဲ အကုန်စားသွားပြီနော်..
ကြည့်ရင်းနဲ့ ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီ... ဒီတစ်ခေါက် အချိန်ရရင်လုပ်စားကြည့်ဦးမယ် မချော..
မိုက်တယ် မကြီးချောရေ ..... ဆန်တိုဖူးကိုလည်းကြိုက်တယ်...မြေပဲတိုဖူးကိုပိုကြိုက်တယ်...မကြီးချောနည်းသိရင် ပြောပါဦးနော်......
မကြီးရေ အိမ်ပြောင်းပီးတာနဲ့ ဒါကိုလုပ်စားဖြစ်အောင်လုပ်စားမယ် ဟဲဟဲ ဘလန်ဒါရှိတယ်း))
စားချင်နေတာ အခုမှ လုပ်နည်းသိတယ် ကျေးဇူး
ဆန်မုန့် ၅၀၀ ဂရမ်ဆို ရေဘယ်လောက် ထည့်ရပါသလဲရှင့်?thank you!
Hi, I'm really interested in this recipe but I don't speak your language. I've used Google Translator but the translation is not accurated. I've understand that I need white rice flour, water and lime?
Could anybody give me the measures of the ingredients and simple directions in English, Spanish or French?